3da Nofember 2018: Sannad-guurada 24aad ee Booliska JSL iyo Shahaadada Xasuuqa Shacabka. W/Q: Siciid Maxamuud Gahayr – somalilandtoday.com
3da Nofember 2018: Sannad-guurada 24aad ee Booliska JSL iyo Shahaadada Xasuuqa Shacabka. W/Q: Siciid Maxamuud Gahayr
Berri waa 3da Nofember 2018ka, waana sannad-guurada 24aad ee aasaaska ciidanka Booliska Somaliland. Sidii dhaqanka ahayd waxa xaflad lagu qaban doonaa taliska guud ee ciidanka booliska. Halkaas waxa lagu soo bandhigi doonaa khudbado iyo jilid. Kooxda Ciidanka Booliska ee Goodir ayaa heeso iyo riwaayado fagaaraha ka jeedin doona. Madaxda Ciidanka ayaa waxyaabihii dhacay sannadkii u dambeeyay ka sheekayn doona. Sidoo kale waxa aan filayaa in ay ka qayb galaan madaxda ugu sarraysa xukuumadda Somaliland, iyaguna weedhooda waa ay gudbin doonaan.
Kollay lama soo hadal qaadi doono carruurtii lagu toogtay buuqii ka dhashay doorashada. Waa gabboodfalkii ugu weynaa ee ay boolisku ku kaceen sannadkaas la soo dhaafay. Waa kuwii mar uu Wasiir Cabdillaahi Maxamed Daahir (Cukuse) isaga oo sheegaya in ay qiime la’aan u dhimanayaan uu lahaa “Allaa yaraxma raaximiinta ha raacina”. Dhacdadaas kaddib waxa uu Taliyaha Guud ee Ciidanka Boolisku u dallacay Sarreeye Gaas, isaga oo markii hore ahaa Sarreeye Guuto. Halkaas sii dhaafin maayo oo waa wixii uu kal hore Prof Mustafe Barud uu liinta ugu cabbay saldhigyada Hargeysa.
Qof ahaan waxa aan ahay dhibbane marar kala geddisan ay ciidanka boolisku ku tacaddiyeen ama gudaha dhigeen, iyaga oo u hoggaansamaya amar ama codsi leexsan uga yimi masuuliyiin xilal ka haysay dawladda. Mararna qudhooda ayaa si toos ah iigu qaaday taxaabis “iska gal, iska bax” ahayd. Sidaas awgeed waan dhiibtaa badheedhahayga ku aaddan ciidanka booliska. Ragga gogoshiisu waa nabad, godobtana waa la isu haynayaa inta uu cafis ka dalbanayo kii duudsiga geystay. Wax uu urur soo saarayna qof looma qabsan karo, saw maaha?
Tan iyogu’gii 2012ka oo Sarreeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan uu noqday Taliyaha Guud ee ciidanka booliska, waxa dhacay dhagaro badan. Waxa ka mid ah dad guryaha loogu daato, kuwo lagu shiishtamo, qolo xorriyatul-qawlka loo cabudhiyo, dad xabsiyo lagu daabulo, nadaafad-xumo ka jirta saldhigyada booliska iyo dad xukuman oo saldhigyo lagu hayo halkii xabsiyada looga gudbin lahaa. Ku-dhaqan-la’aanta xeerka booliska ayaa xuskeeda leh.
Dhanka kalena waa ay jiraan waajibaad ay gutaan ciidanka boolisku. Marka aad aragto inta ay tuug iyo sharwade gacanta ku hayaanna, waxa laga yaabaa in aad u ducayso. Aniga se waxyeelladooda ayaa mar walba ii muuqata. Mooyi, ishii aan waxtarkooda ku arki lahaa waan dabayaa.
Dad kala duwan oo arkay shahaadadan uu Akadamiga ERA sannadkii 2015ka hawada u mariyay Sarreeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan uu noqday Taliyaha Guud ee ciidanka booliska, isla markaana ay xaruntaasi dib u cusboonaysiisay 2018ka, keliya waxa bahda ERA ku yidhaahdaan “Ha is xidhin”. Waxa ay ahayd mar ay boolisku foodda rasaas kala dhaceen wiil uu dhalay marxuun Axmed-Jabbaan, sidoo kalena saldhigga Koodbuur lagu khaarajiyay maxbuus isla shaqaaqadaas loo xidhay oo ay is maandhaafeen askari ilaalo ahaa.
Bayaankii Guddoonsiinta Shahaadada Xasuuqa Shacabka Somaliland oo soo baxday 15kii Ogos 2015ka, waxa uu u dhignaa:
Ujeeddo: Guddoonsiinta Billadda Xasuuqa Shacabka Somaliland
Ku: Sarreeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan, Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland
Markaanu aragnay sida ay ciidanka boolisku xabbadda nool ula dhacayaan carruur aan qaangaadhin oo guryahooda joogta.
Markaanu aragnay sida badheedhka ah ee aad u tooganaysaan maxaabiista gacantiinna ku jirta,
Markaanu xaqiiqsannay in dhiigga shacabku idinla noqday wax fudud oo aan cidiba ku murmin
Markaanu aragnay sida aad garoommada u gashaan una dishaan dhallinyarada ciyaartoyga ah.
Markii la isku raacay sida aad heeganka ugu tihiin dhagarta shacabkii aad masuulka ka ahaydeen iyo duminta nabadgelyada uu xilku idinka saaran yahay.
Markii ay caddaan noqotay dulmiga, tacaddiga, xadhiga iyo duudsiga aad caadaysateen oo noqday mid aan la tiring karin.
Markii aanu ka baqannay in aad na xidho haddii aanu shahaadadan kuugu keenno xafiiskaaga iyo xarumaha aad ka taliso.
Waxaanu garannay in aanu hawada kuu soo marinno shahaadada xasuuqaku guddoonsiinno maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka Ogos, 2015ka. Waad ku mahadsan tahay sida aad nooga guddoomi doonto billaddan aad waxqabadkaaga ku mutaysatay.
Xafiiska Akadamiga Waxbarashada iyo Cilmi-baadhista